Kutambura kubva nasal spray kupindwa muropa? Nhanho 1: Nyora pasi Afrin - Zvinodhaka Info | Chikunguru 2021
Kambani Hutano Dzidzo, Zvipfuwo Hutano Dzidzo, Hutano Hutano Dzidzo, Nhau Nhau, Wellness Zvinodhaka Vs. Shamwari Wellness Checkout Nharaunda Nhau Info Info, Nhau Dzidzo Yehutano Zvipfuwo Dhinda Kambani, Info Info
Kuru >> Zvinodhaka Info >> Kutambura kubva nasal spray kupindwa muropa? Nhanho 1: Nyora pasi Afrin
Kutambura kubva nasal spray kupindwa muropa? Nhanho 1: Nyora pasi Afrin
Kana iwe uchirwara nemaronda emwaka kana chirwere chepamusoro chekufema, shamwari dzako dzinogona kukuyambira nezve njodzi dzeAfrinkupindwa muropa. Kana iwe ukaishandisa kamwe chete, muviri wako unozovimba nazvo, vanodaro. Kunyangwe isingatariswe sekupindwa muropa neyakajairwa pfungwa, muviri wako unokwanisa kuva unoenderana nemushonga. Vanachiremba vanoshevedza ichi chinoshamisa kudzokedzana kuzara, kana medicated rhinitis , uye iri dambudziko chairo. Muchokwadi, inogona kuve inokonzeresa kusvika kusvika ku9% yekushanya kune ma allergists uye ENT vanachiremba.
Afrin (oxymetazoline) is a nasal decongestant spray iyo dzimwe nguva inoshandiswa kudzora mhino ine mhino uye sinus kumanikidza. Sezvo mwaka unotonhora uye wefuruu unotanga, iwe unokwanisa kushandisa mushonga uyu weOTC. Asi iwe unofanirwa kungwarira mhedzisiro yemhedzisiro yekuishandisa kakawanda.
Kudzokedzana kuzadza 101
Kuti tinzwisise kuti mhino yekupusha yemhashu inoitika sei, ngatitorei nekukurumidza kutarisa kwako kwemhino. Sekureva kwaDkt Duane Gels, MD, chiremba wezvese ane Annapolis Allergy uye Asthma muMaryland, yako yekumusoro yemhepo inowedzera uye inodzikira nguva dzese.
Mhuno yakazadzwa nemidziyo yeropa, sezvo chero munhu anga aine mhino yemhino yakafanana neyakaitika mhosva anogona kupupura, Dr. Gels anodaro. Sezvo chinzvimbo chedu chinoshanduka kubva pakamira kusvika pakugara pasi, uremu hweropa hunoshanduka. Izvi zvinoita kuti mhino dzako dzirege kuvhara kana iwe ukachinja nzvimbo.
Adrenaline inogona kuchinja kuyerera kweropa mumhino dzako zvakare. Adrenaline yakaburitswa muropa panguva yekurwa kana kupindura ndege (senge kumhanyira kunzvenga chikara) inosungira kune zvinogamuchirwa mumhino, ichiwedzera mapasuru kuti tigone kufema nyore, Dr. Gels anotsanangura.
Anotsanangura kuti oxymetazoline (iyo inoshanda Afrin ingredient) inoshanda nekuteedzera adrenaline mumhino dzako. Inomanikidza mhino dzako kuvhurika nekusvina ropa kubva munyama dzako dzemumhino. Kana iwe uchimwaya pfuti yeAfrin nasal spray mumhino dzako, iwe unozonzwa nekukurumidza kusununguka kubva mukuzara kunotyisa ikoko. Nehurombo, zororo nderenguva pfupi.
Kana iro ropa richidonha kubva mumhino dzako, saka neoksijeni uye zvinovaka muviri zvinounzwa neropa nazvo. Nyama dzako dzemumhuno dzinoda zvinhu izvi, saka kana iyo Afrin yapera, muviri wako unokurira nekukweva ropa rakawanda kumhino dzako, uye unonzwa kutonyanya kubatikana kupfuura zvawakaita kare.
RELATED: Chii chinonzi Afrin?
Chii chinonzi kudzokedzana kuzere?
Kudzokedzana kwakawanda kuri kuwedzera kumhanyisa kwemhino sezvo iyo yakasarudzika yemumhino inopera, ichiita kuti murwere ashandise pfapfaidzo kurwisa kuzara uku, anodaro Dr. Susan Besser, MD, mutarisiri wekutanga anoshanda mukurapa kwemhuri ku Ngoni Vanachiremba Pachako muBaltimore. Nekudaro, murwere anoramba achinzwa kuda kushandisa pfapfaidzo kurwisa kuenderera kuzara. Mukudaro, izvi zvinotungamira mukutsamira pamushonga kudzora zviratidzo.
Mune mamwe mazwi, inova yakaipa kutenderera. Mushure memazuva mashoma ekushandisa, iyo yemumhino yekupfira ichabvisa kuzara kwako kwenguva ipfupi uye ipfupi, uye zvichikonzera kudzokororwa. Iyo kukanganisika kwemvura inogona kushata zvekuti pakupedzisira, Afrin haina kujekesa yako yemhepo zvachose. Dambudziko rinogona kuenderera kwemakore.
RELATED: Afrin vs. Flonase
Kudzokorora kusanganisa kurapwa
Nzira yakanakisa yekupwanya kutenderera kweAfrin kupindwa muropa, Dr. Besser vanopa zano, ndeyekumira kutora mishonga inotonhorera turkey. Tarisira kuve nenhamo kwemazuva mashoma muviri uchipora, anodaro. Mumwe anogona kushandisa nasal steroid (senge Flonase) kubatsira kudzikisira zviratidzo muviri uchipora. Mumatambudziko akakomba, steroid yemumuromo inogona kupihwa, izvo zvinogona kubatsira.
Dr. Gels vanowedzera kuti saline spray inogona kubatsira kudzikisa kuzvimba. Uye zvakare, Oral decongestants senge pseudoephedrine kana phenylephrine mahwendefa anogona kusimba pasina kutyisidzira kwekudzokeresa kuzara, anodaro.
yakawanda sei vitamini d yandinofanira kutora kana ikashomeka
Kana iwe uchinzwa chete Afrin spray ichashanda, Dr. Besser anoti hazvina kukwana kwezuva rimwe kana maviri. Ndakatoona vanachiremba ve ENT vachikurudzira kuti ishandiswe zvakanyanya, anodaro. Asi ini handingafarire kusvika pakutanga kwazviri; shandisa mamwe matanho ese pamberi peAfrin.
Kune dzimwe nzira dzinoverengeka dzekurapa kumusana kwemhino dzisingakonzere kutsamira.
Kana dambudziko iri chisimbwa, topical nasal steroid ( Flonase uye Nasacort ) kudzora kwega kwega kuzvimba kwemazuva mashoma, Dr. Gels anodaro. Izvi zvinowanikwa pamusoro pekambani. Chiremba Singulair inogona zvakare kugadzirisa kusanganisa kwemhuno.
Kudzokazve kumisidzana chinetso chinoshamisika chinowanzoitika chinogona kukukonzera makore ekurwadziwa kwekufema. Kana iwe uchirwara nehutachiona kana hutachiona hwepamusoro hwekufema, taura nachiremba wako nezvezvinhu zvinosarudzika izvo zvisingakuregedze kufema zvisina kugadzikana.
RELATED: Chii chinonzi Flonase? | Chii chinonzi Nasacort? | Chii chinonzi Singulair?
Tora kadhi reSpecialCare
Kusvuta kunowedzera here njodzi yekuwana COVID-19?
ndirini pandinogona kutora viagra mushure mekutora cialis
kukosora kwakanyanya uye mushonga unotonhora wevakuru
pane here mushonga wepanyama weenail fungus
Ndeipi muyero wepakati we melatonin
mangani mamirigiramu ebuprofen akachengeteka
sei kubvisa cherry angiomas paganda